SocialReacher: Inona no atao hoe Advocacy ho an'ny mpiasa sosialy? | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 17, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny atiny dia nihaino ny namako aho Mark Schaefer miresaka momba ny orinasa iray izay nanana mpiasa mihoatra ny iray hetsy saingy mizara sosialy vitsivitsy fotsiny rehefa nanavao ny haino aman-jery sosialy ilay marika. Inona no karazana hafatra alefany amin'ny mpanjifa? hoy i Mark. Fanontaniana lehibe ary tsotra ny valiny. Raha tsy nizara ny fanavaozana ny fiaraha-monina ny mpiasa - azo inoana fa mpisolo vava lehibe indrindra an'ny marika, mazava ho azy fa tsy zavatra mendrika zaraina mihitsy izy ireo.
Niara-niasa tamin'ny orinasam-panjakana iray hafa izahay izay matihanina amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ny ankamaroan'ny mpiasa. Tsy ambanin'ny tsipika CSR ireo, niara-niasa tamin'ny mpanjifa tsirairay izy ireo mba hanala ny fifandonana teo amin'ny mpanjifa sy ny antoko fahatelo, na hahita vahaolana lehibe ho an'ny mpanjifa. Isan'andro dia handeha hiasa izy ireo ary hahatratra vokatra mahavariana. Olana iray ihany… tsy nisy nahalala an'io. Tsy nizara ireo tantara ireo ny ekipa atiny. Ireo ekipa fampiroboroboana dia tsy nampiroborobo ireo tantara ireo. Tsy nizara ireo tantara ireo ny mpiasa.
Ny ratsy indrindra dia ny mpanjifa ho avy na oviana na oviana naheno ny tantara.
Namporisihiko ny orinasa hametraka an paikady mpiaro ny mpiasa izay ahafahana mamindra mora foana ny tantara amin'ny ekipa atiny, ny ekipa fampiroboroboana dia afaka miasa miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe ary manararaotra mampiroborobo ny atiny, ary - indrindra indrindra - ny mpiasa dia hamerina ilay asa mahatalanjona izay ataon'izy ireo.
Mampalahelo fa nandany vola be tamin'ny dokambarotra fahitalavitra vaovao sy dokam-barotra bebe kokoa ity orinasa ity. Ugh.
Inona no atao hoe Advocacy ho an'ny mpiasa sosialy?
Fitaovana mpiaro ny haino aman-jery sosialy ahafahan'ny mpiasan'ny orinasanao sy ny mpiara-miasa aminao ho mpisolovava amin'ny marikao. Rehefa mampiroborobo sy manako ny atiny, hetsika, vaovao ary fanavaozana amin'ny alàlan'ny media sosialy ny paikady, mampisondrotra ny fisian'ny media sosialy an'ny orinasanao ny paikady, manamafy ny fahazoana ny marikao ary manangana fitokisana amin'ny alàlan'ny fampidirana ny ekipanao hizara sy hampiroborobo ny atin'ny orinasa.
Vao natomboka, SocialReacher dia sehatra naorina ho an'ny mpiasa sy ny mpiara-miasa mahita sy mizara ny tantaran'ny marikao. Ny tsara indrindra dia azonao atao ny manara-maso ny valiny ary manentana ny fizarana mihitsy aza. Araka ny Altimeter, 21% amin'ireo mpanjifa no maniry ny atiny navoakan'ny mpiasa, mihoatra ny fomba fiasa hafa
Tsy misy zavatra azo atokisana kokoa noho ny fanananao ny mpiasao mahalala ny orinasa avy ao anatiny mizara an-tsitrapo ny atiny ary mampiseho ny avonavony amin'ny maha-mpikambana anao. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia mahazo fidiram-bola ara-tsosialy, nefa ny mpiasa dia loharanom-barotra tsy voatanisa. Ny tanjonay miaraka amin'ny SocialReacher dia ny hanatsara ny fampahalalam-baovao sosialy ho an'ireo orinasa raha manampy ny mpiasa hahatsapa ho voarohirohy amin'ny fivoarana sy ny fitomboan'ny marika. Ismael El-Qudsi, tale jeneralin'ny Internet República
Fomba sy fahaiza-manao an'ny SocialReacher
Easy Customization - Ny mpitantana ny fampielezan-kevitra voatondro dia mamaritra ny karazana atiny izay hozaraina, rehefa hanomboka ny fampielezan-kevitra, ny ampahan'ny mpiasa kendrena, ary ny haino aman-jery sosialy hampiasaina.
Fankatoavana mialoha ny atiny - Ny sehatra dia mamela ny alalana hanaiky ireo lahatsoratra alohan'ny hamoahana azy ireo hitazomana ny firindrana amin'ny paikadin'ny varotra ankapobeny.
Dashboard famporisihana - ny orinasa dia afaka mamelona valisoa handrisihana ny fizarazaran'ny mpiasa amin'ny fampielezan-kevitra.
Traikefa amin'ny fiteny roa - Ny sehatra dia misy amin'ny teny Anglisy sy Espaniôla ho an'ny fanaparitahana atiny bebe kokoa amin'ireo tsena kendrena.
Analytics amin'ny fotoana tena izy - ny orinasa dia mahazo fidirana amin'ny antsipirihany Analytics, ao anatin'izany ny retweet, ny tiany, ny tsindry, ny hevitra ary ny hevitry ny atiny isaky ny mpampiasa sy ny fampielezan-kevitra.
Ahoana ny fomba fiasan'ny SocialReacher?
The SocialReacher Ny sehatra dia somary tsotra ihany raha hamboarina sy hitazomana. Manaraka ny dingana dimy tsotra izay hitantanana mora foana ny mpiasao, hikirakira ny atiny hizarana, hizara izany, handrefy ny valiny ary hampihetsika ny fampiasana fanampiny amin'ny alàlan'ny gamification.
Manasà mpiasa sy mpiara-miasa
Mamorona sy manaova atiny
Mizarà ny atiny
Mandrefy ny valiny
Manamora ny fampielezan-kevitra amin'ny Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn ary hatrany amin'ny bilaogin'ireo mpiasa manokana ilay sehatra. Ity misy pikantsary iray amin'ny dashboard SocialReacher:
Ny sehatra dia novolavolaina ary navoakan'i Internet República, masoivohon'ny varotra nomerika izay manampahaizana manokana amin'ny famolavolana vahaolana ara-barotra an-tserasera sy turnkey izay manambatra ny fahaizan'ny SEO, media sosialy ary bilaogy. Niorina tao Madrid, Espana tamin'ny 2011 avy amin'ny ekipa nisy ny mpitantana HAVAS taloha sy Microsoft, ny Internet República dia nanitatra iraisam-pirenena niaraka tamin'ny birao tany Etazonia sy Amerika Latina. Ireo orinasa toa an'i BMW, Volkswagen, Renault, Bacardi, ary Yahoo dia natoky ny Internet República tamin'ny fanentanana ara-barotra nomerika.
Tags: fisoloana vavafiarovana ny mpiasagamification ny mpiasaInternet Repúblicafanentanana amin'ny media sosialympiasan'ny media sosialyfanentanana ho an'ny mpiasa amin'ny media sosialysocialreacherinona ny fanentanana ataon'ny mpiasainona ny fanentanana amin'ny media sosialy?